août 2014 – filazantsaramada
Fanitarana ny fandefasana amin’ny radio ny fandaharana “Henoy ny feony”
Araka ny vinavina ao amin’ny fandaharan’asa amin’ity taom-piasàna 2014-2015 ity dia kasaina halefa any amin’ny faritra hafa eto Madagasikara ny fandefasana amin’ny radio ny fandaharana “Henoy ny feony”. Vita soamantsara tamin’ny 14 aogositra lasa teo tany Mahajanga ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana amin’ny Radio Fahazavana FM 88.6 any an-toerana. Mahajanga indray izany no tanàna faha-dimy andefasana […]
Publié parfilazantsaramada août 27, 2014 août 23, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fanitarana ny fandefasana amin’ny radio ny fandaharana “Henoy ny feony”
TENA TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA MARINA VE NY TENANTSIKA?
« Izao no teny tonga tamin’i Jeremia avy tamin’i Jehovah: Mitsangana eo ambavahadin’ny tranon’i Jehovah, ary torio eo izao teny izao, ka ataovy hoe: Mihainoa ny tenin’i Jehovah hianareo, ry Joda rehetra, izay miditra amin’ireto vavahady ireto mba hiankohoka eo anatrehan’i Jehovah. Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Ataovy tsara ny làlanareo sy […]
Publié parfilazantsaramada août 22, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TENA TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA MARINA VE NY TENANTSIKA?
Sekoly ambony INS.P.N.MAD sy ny Feon’ny Filazantsara.
Fanentanana ireo mpianatra hiroso amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra. Ny Feon’ny Filazantsara dia mikendry mandrakariva ny hitondra ny anjarabirikiny amin’ny fitaizana ny fiainam-panahin’ireo mpianatra eny anivon’ireo Sekoly Ambony, mba hanana tanora vanona aorian’ny fianarany. Koa, Sekoly Ambony iray indray, INS.P.N.MAD izay mamoaka mpianatra ho « Paramédicaux sy Polytechniciens » no notsidihan’ny Feon’ny Filazantsara ary nanaovana fanentanana mikasika ireo […]
Publié parfilazantsaramada août 20, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Sekoly ambony INS.P.N.MAD sy ny Feon’ny Filazantsara.
MIKATSAKA MPIARA-MIASA MAHATOKY ANDRIAMANITRA.
« Nony ampitso dia te-hiala ho any Galilia Jesosy, ary nahita an’i Filipo Izy ka nanao taminy hoe: Manaraha Ahy. » (Jaona 1:35-43) MANARAHA AHY!…Maro tamintsika no efa nantsoin’I Jesosy toy izany teo amin’ny fiainantsika. Mety tsy ho tamin’ny teny mivantana no nandrenesantsika izany, fa mety kosa, ho tamin’ny fomba maro samihafa, an-kolaka. Tao ohatra ny hoe: […]
Publié parfilazantsaramada août 14, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MIKATSAKA MPIARA-MIASA MAHATOKY ANDRIAMANITRA.
Iray volan’ny Vondrona Fototra Laika FJKM Ambohimiadana Fanilo (SPAA 11)
Ny Dian’ny mpivahiny: horonan-tsarimihetsika ho fampitomboana sy ho fampiorenana ny finoana. Tsy mitsahatra ny mikatsaka sy mitady izay fomba entina hampandrosoana sy hampiorenana ny finoan’ireo kristiana ao aminy hatrany ny Fiangonana. Nampisongadina izany ny Vondron’ny Kristiana Laika (VFL) ao amin’ny FJKM Ambohimiadana Fanilo ny Alahady 03 Aogositra 2014 tolak’andro lasa teo. Fandefasana ny horonan-tsarimihetsika mitondra […]
Publié parfilazantsaramada août 14, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Iray volan’ny Vondrona Fototra Laika FJKM Ambohimiadana Fanilo (SPAA 11)
« Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, dia miari-tory foana ny mpiambina. » Salamo 127:1b Raha ity Salamo ity no dinihina, dia tia ny hampitodika amin’Andriamanitra izy ity. Marina fa mampiasa olombelona Andriamanitra amin’ny mahazatra, ary hita ao amin’ny fomba fiasany tao amin’ny Testamenta Taloha izany: namponina an’i Adama tao amin’ny saha Edena Izy hiasa sy […]
Publié parfilazantsaramada août 8, 2014 août 8, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur VOAFETRA IHANY.
Nanolotra boky ho vakian’ireo olona manatona ny « Dentisterie » ny Feon’ny Filazantsara (FF) Anisan’ny programan’asan’ny Feon’ny Filazantsara ny fanaganana biblioteka izay hanolorana boky literatiora kristiana amin’ny Ivontoerana maro toy ny Fiangonana, Sekoly, Fikambanana. Ny tanjona amin’izany moa dia ny hahafahana manome torolalana mahasoa sy mampita ny Tenin’Andriamanitra hanampy ny olona mpamaky hiatrika ireo olana eo amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada août 7, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Toeram-pamakiam-boky
« Ary tsy niahanahana ny amin’ny teny fikasan’Andriamanitra tamin’ny tsy finoana izy,fa nampaherezin’ny finoana ka nanome voninahitra an’Andriamanitra. » Romana 4:20 – Ny finoana resahina eto dia ny finoana an’Andriamanitra, ary anisany ahitana izany ny ao amin’ny Hebreo 11:1, « ary ny finoana no fahatokiana ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. » Nanantena an’Andriamanitra sy ny teny […]
Publié parfilazantsaramada août 1, 2014 juillet 31, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FINOANA…